Nolol madaxbanaan ee dhalinyarada - Caymiska Caafimaadka Maxaliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Faa'iidooyinka + > Nolol madaxbanaan ee dhalinyarada
Ku taageerida dhalinyarada wadada ka socota daryeelka korinta iyo ku noolaanshaha kaligood.
Barnaamijka Nolosha Madaxa Banaan ee Dhalinyarada
Helitaanka caafimaadkaaga ugu fiican wuxuu ka bilaabmaa dareemid amni. Barnaamijka Madaxa-bannaan ee Nolosha wuxuu siiyaa waxbarasho xirfadeed nololeed dhalinyarada 15-18 sano jir ah, iyadoo ujeedku yahay inuu kaa caawiyo xirfadaha iyo ilaha aad keligaa ku noolaan karto.
Barnaamijkani waa mid ikhtiyaari ah oo u furan dhammaan dhalinyarada buuxisa shuruudaha.
Waxaad ka heli kartaa adeegyo kaa caawiya:
Adeegyada meelaynta shaqada
Ilaa $ 500 oo maalgelin ah oo loogu talagalay waxqabadyada kobcinta ee la xiriira himilooyinka nololeed ee madaxbannaan
Iyada oo ay weheliyaan ururada bulshada ku salaysan ee maxalliga ah iyo qabaa'illada ku nool Washington oo dhan, barnaamijka Independent Living wuxuu kaa caawinayaa inaad hesho xirfadaha aad ugu baahan tahay inaad ku guuleysato.
Dhallinyarada da'doodu tahay 15 iyo wixii ka weyn ayaa xaq u leh haddii aad ku jirto ama aad ku jirto meelaynta dibedda guriga ugu yaraan 30 maalmood ka dib dhalashadaada 15aad. Marka la go'aamiyo u-qalmitaanka, waxaad sii wadaysaa u-qalmitaanka illaa aad ka gareyso 18.
Waxbadan ka baro barnaamijka Nolosha Madaxa Banaan
Marabtaa inaad kubiirto barnaamijka Nolosha Madaxa Banaan?
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) ayaa kaa caawin kara inaad wax bilowdo.
La xiriir CHPW